Andrea (apostoly) - Wikipedia
I Andrea dia iray amin'ireo mpianatr'i Jesosy. Jiosy Galiliana sady rahalahin'i Petera (na Piera) izy. Mpianatr'i Jaona mpanao batisa izy taloha. Atao hoe Protokleto ("Ilay Nantsoina Voalohany") koa izy satria nanaraka an'i Jesosy raha vantany vao vita batisa ity farany.
I Andrea, nataon'i Yoan avy any Gabrovo any Bolgaria. taonjato faha-19.
Ny hoe Andrea dia fanagasiana ny anarana amin'ny teny grika hoe Ἀνδρέας / Andreas. Andreas ihany koa no fiantsoana azy amin'ny fiteny latina. Andrew amin'ny teny anglisy fa André kosa amin'ny teny frantsay.
I Andrea araka ny BaibolyHanova
Araka ny voalaza ao amin'ny Baiboly dia teraka tao Betsaida tao Galilia tao amoron'ny farihy Tiberiasy (na Tiberiada) i Andrea. Mpanjono tahaka an'i Simona Petera rahalahiny izy. Tamin'ny voalohany dia mpianatr'i Joany Batista izy nefa rehefa nasehon'i Joany mpanao batisa fa i Jesosy no "ilay Zanakondrin'Andriamanitra izay hitondra ny fahotan'izao tontolo izao" (Joa. 1.29-40), dia nanaraka an'i Jesosy izy ka tsy nisaraka taminy intsony. Izy no mpianatra voalohany notaomin'i Jesosy hanaraka azy.
Mpanelanelana an'i Jesosy tamin'ny olon-kafa no tena ahafantarana an'i Andrea. Izy no naneho an'i Simona rahalahiny tamin'i Jesosy. Tamin'ny nampitomboana isa ireo mofo sy hazandrano dia izy no nitondra ilay zazalahy nanana mofo dimy sy hazandrano roa teo amin'i Jesosy. Tamin'ny fotoana te-hifanatrehan'ireo Grika amin'i Jesosy dia tamin'i Andrea no nitenan'izy ireo an'izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrea_(apostoly)&oldid=819005"
Dernière modification le 23 Aogositra 2018, à 07:24
Voaova farany tamin'ny 23 Aogositra 2018 amin'ny 07:24 ity pejy ity.